Iwo akanakisa esainzi enganonyorwa
Science Fiction Novel Ongororo
Mukomana uye Imbwa Yake pakupera kwenyika, naCA Fletcher
Post-apocalyptic fictions inogara iine mbiri yekukanganisa kuparadzwa zvachose uye tariro yekuzvarwa patsva. Mune ino kesi, Fletcher anodhonzawo akajairwa masiketi anojekesa kuti yakazosvika sei kune iyo isinganzwisisike nzvimbo iyo vapenyu vari mukutarisira kuvaka zvakare nyika yavo ...
Siya Nyika Pasi, naRumaan Alam
Kutizira kuLong Island hakuna kumbosvika kure kwakaringana pasina kana chinhu. Iwe unogona kuve mukana kana iwe ukangoedza kushushikana mushure mesvondo rakaoma rehondo muNew York City; asi chirongwa chakashata kana iko kuguma kwenyika, apocalypse kana ...
Kusvika… Bazi Rezve Ramangwana, Kim Stanley Robinson
Kubva Kubazi raGeorge Orwell reRudo kuenda kuBazi reNguva, dzakateedzana dzakateedzana dzakakunda paTVE. Mubvunzo ndewokubatanidza mahushumiri nedystopian, futuristic maficha uye nenharaunda yakaipa ... ichave iri nyaya yemakurukota achigadzira mabasa erima akapihwa mumabhegi avo eganda ... Iyo ...
Nzara, naAsa Ericsdotter
Iwo mafaro anofadza ari dystopias yeinogona kuve. Nekuti nzira ye dystopi inogara iine chinhu chikuru chezvemagariro. Zvese zvakafumurwa kuhurongwa hutsva pamwe nekuedza kwaro kupandukira uye kuzviisa kwaro kutya. Kubva kuna George Orwell kuenda kuna Margaret Atwood vazhinji vevanyori vakuru ...
Oryx uye Crake, naMargaret Atwood
Kudzokororwa kweanokurudzira sainzi ngano inoshanda mukushayikwa kwenyaya nyowani dzekufudza inofungidzirwa pakati pe dystopian uye post-apocalyptic inoenderana nenguva. Margaret Atwood chete ndiye asiri wenguva dzose munyori wesainzi. Kwaari, iyo mamiriro anoperekedza iwo mazano zvakanyanya ...
Anomaly, naHervé Le Tellier
Kubhururuka ivhu (kana zvirinani denga) inorimirwa juzi yesainzi fungidziro. Mumwe anongoda kurangarira ngano yeBermuda Triangle, iyo yakakurumidza kumedza ngarava sevarwi vehondo, kana ma langoliers e Stephen King zvaidya nyika...
Vachanyura mumisodzi yaamai vavo, naJohannes Anyuru
Sayenzi yekunyepedzera dzimwe nguva haina kudaro. Uye zvinonakidzawo kana zvasvika kune zviwanikwa, danho kana chikonzero chakareruka. Kune munyori Johannes Anyuru, akasvikirwa munovhoriyamu nemweya wekutsvaga wakajairika mamiriro ake semunyori akabatanidzwa, zano nderekutora zvakare ...
Peji1 Peji2 ... Peji7 Zvadaro →